Shiinaha PETG Mirror warshad iyo alaab-qeybiyeyaal. Donghua
Hxiiq Gkhasaaro PETG Xaashida Muraayadda, Xaashida Muraayadda ee PETG
Muraayadda PETG dahaadhku waa xaashi balaastiig ah oo aad u kala jaad ah oo badanaa loo isticmaalo injineernimada, qurxinta, weelasha wax lagu keydiyo, iyo inbadan maxaa yeelay si fudud ayaa heerkul loogu hagaajiyaa loona gooyaa si loo abuuro qaabab isku dhafan oo leh faahfaahin sax ah. Muraayadda PETGwaxay bixisaa faa iidooyin kala duwan oo ka imanaya hufnaan sarreysa, haynta dhalaalka dusha sare, culeys la'aan caddeyn, aqbasho khad iyo rinji, waana FDA-u oggolaatay xiriirka cuntada. Xaashida 'PETG Mirror sheet' waxay bixisaa been abuur isku dhafan oo leh saameyn saameyn wanaagsan, dabacsanaan qaabeyn wanaagsan iyo xawaareynta been abuurka. Muraayaddeenna PETG waxay ku habboon tahay Alaabta Carruurta, waxyaabaha la isku qurxiyo, iyo agabyada xafiiska. Waxaan leenahay dhumucdiisuna tahay 0.25 ~ 1 mm, cabbirka 915 * 1830 mm, midab qalin oo saafi ah oo la heli karo si loogu dalbado adeegyo u dhigma ilaa heer.
Faa'iidooyinka Muraayadda PETG
Xaashida 'PETG Mirror sheet' waxay bixisaa been abuur isku dhafan oo leh saameyn saameyn wanaagsan, dabacsanaan qaabeyn wanaagsan iyo xawaareynta been abuurka.
Muraayadda PETG waa mid fudud oo jilicsan. Sidoo kale waa mid u adkaysata kana xoog badan dhalada dhaqameed. Muraayadda 'PETG' waxay siisaa faa iidooyin kala duwan oo ka imanaya hufnaan ka sarraysa, xajmiga dhalaalka dusha sare, ma jiro wax walwal ah oo caddeeya, waxay aqbashaa khadadka iyo rinjiga, waana FDA-u oggolaatay xiriirka cuntada. Adkaysiga xaashidan acrylic-ka ah awgeed, muraayadaha PETG waxay ku habboon yihiin muraayadaha musqusha, muraayadaha qurxinta, iyo caruusadda lagu ciyaaro.
Magaca Badeecada Xaashida Muraayadda Sare ee Gloss PETG, Xaashida Muraayadda PETG
Waxyaabaha Polyethylene Terephthalate Qalabka Glycol
Cabir 915 * 1830mm, caado-jarid u dhiganta
Dhumucdiisuna 0.25 - 1.0 mm
Maska duugista Filimka PE
Isticmaalka Alaabada xaashida muraayadda caaga ah
Astaamaha Saamaynta u adkaysata, dabacsan, Eco-saaxiibtinimada leh, Badbaadada ilmaha
Codsiga Alaabada Carruurta, waxyaabaha la isku qurxiyo, iyo agabyada xafiiska
Hantida jidhka iyo kiimikada
Xaaladda Jirka: Xaashida muraayadda adag
Barta Dhalaalka: Lama heli karo
Barta karkarinta: Lama heli karo
Heerkulka Burburka: 716 ° F (380 ° C) qiyaastii ..
Barta Flash:> 842 ° F (> 450 ° C)
Heerkulka Gawaarida Gawaarida: 880 ° F (471 ° C)
Xuduudaha Qarax: Lama heli karo
Heerka uumi baxa: Looma adeegsan karo
Cadaadiska Uumiga: Uumid Looma Baahna
Cufnaanta: Looma adeegsan karo
Cufnaanta Qaraabada: 1.27
Go'yaasha muraayadda PETG ayaa ku habboon in loo isticmaalo been-abuurka alaabta carruurtu ku ciyaarto, agabyada xafiiska iyo adeegsiga qurxinta. Codsiyada guud waxaa ka mid ah:
• Isticmaalka qurxinta
• Qalabka Xafiiska
• Naqshadaynta beerta
• Muraayadda amniga
• Soo bandhig alaabooyin
• Miiska Sare POP
sheet muraayad xayawaan sare leh
go'yaal muraayad petg koolo
warqad mirorr caag ah
Muraayadda caaga ah ee PETG